Hoos u dhac aad u weyn oo ku yimid ololihii doorasho ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hoos u dhac aad u weyn oo ku yimid ololihii doorasho ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Waxaa saacadihii ugu dambeysay hoos u dhac aad u weyn uu ku yimid ololihii doorasho uu waday madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd ahna musharax markale u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ahaa musharaxiinta maalmihii ugu dambeysay ugu cad-cadaa ololaha doorasho ayaa haatan la sheegaya inay lasoo daristay lacag yaraantii ugu baahsanayd, waxaana saacadihii ugu dambeysay ololahiisa doorasho uu ku yimdi hoos u dhac weyn.
Ilo lagu kalsoonaan karo oo ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegeysa in Sheekh Shariif uusan weli wax kharash ah bixin, iyadoona ay taasi keentay in xildhibaanadii isaga taageersanaa ay xilli dambe xalay kala aadaan musharixiinta kala ah Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Sidoo kale, warar hordhac ah aynu ka heleyno qaar ka mid ah gacan-yarayaasha Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegaya inay haatan haysato lacag la’aan aad u baahsan marka loo eego musharixiinta safka hore kaga jira ololaha doorasho, kuwaas oo intooda badan lacago badan ku farqay xildhibaanada u codeyn lahayd.
Arrintaasi ayaa keentay inuu mugi weyn galo ololaha doorasho ee Sheekh Shariif, waxaana laga yaabaa inuu codad aan sidaas u badnayd ka helo doorashada maadaama inta badan xildhibaanada uu gorgortan kula jiray ay u weecdeen musharixiinta kale.
Illaa iyo haatan lama oga sida ay ku dambeyn doonto rajadda uu Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka qabo doorashada saacado kadib ka bilaaban doonta xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho, iyadoona doorashadaasi ay maanta codeyn doonaan illaa 329 xildhibaan oo isugu jira Aqalka hoose iyo Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.